Real Madrid iyo Atletico Madrid oo u soo baxay Sema Finalka Champions League · Jowhar.com Somali News Leader
by A M | Wednesday, Apr 19, 2017 | 3377 views
April 19 (Jowhar)— Kooxaha isku magaalada ah ee ka dhisan magaalada Madrid ayaa xalay xaqiijiyay u soo bixitaanka wareega afar dhamaadka ama Sema Finalka Koobka Horyaalada Qaarada Yurub ee Uefa Champions League.
Real Madrid ayaa 4-2 ugu awood sheegatay Kooxda Bayern Munich, kaddib ciyaar xalay ka dhacday Garoonka Santiago Bernabue, waxaana isku dar labadii is arag ay Sema Finalka ugu soo gudubtay 6-3.
Ciyaartii xalay oo aheyd mid xiiso leh ayaa waxaa Kooxda Bayern Munich laga saaray ciyaaryahankooda Vidal, kaasoo la siiyay calaamada Casaanka ama Roozo daqiiqadii 84aad ee dhamaadka ciyaarta.
Kooxda Real ayaa is aragii hore ee guriga Munich ku soo badisay 2-1, waxaana is araga labaad ee gurigeeda ay u baahneyd bareejo ama guul, hase ahaatee taas ma dhicin, Bayern Munich ayaa 90-kii daqiiqo ee ciyaarta ku badisay 2-1, taasoo isku dar labadii is arag ay farqiga goolasha ka noqdeen isku mid.
Sidaas darteed ayaa waxaa lagu daray 30-daqiiqo dheeraad ah, waxaana Real Madrid ay 15-kii daqiiqo ee dambe ay heshay 3-gool oo xiriir ahaa, kaasoo niyad jebiyay Bayern Munich.
Ciyaaryahan Ronaldo ayaa dhaliyay saddexley, isagoo dhigay mar kale taariikh, waxaa uu dhaliyay goolashiisa 100aad ee Koobkan Champions League.
Goolkii bar baraha ee uu Ronaldo dhaliyay waxaa loo arkayay inuu ahaa Offside, marka la eego muuqaalada ku celiska ahaa ee la daawaday.
Ciyaartoyda Bayern Munich ayaa Garsooraha ku dhaliilay inuu ahaa ninka ciyaarta dilay, ee niyad jebiyay, kaddib markii uu galay qaladaad.
Real Madrid ayaa haatan u soo baxday markii 7aad oo isku xigta wareega Sema Finalka Champions League.
Dhinaca kale Kooxda Atletico Madrid ayaa iyana xalay xaqiijisay u soo bixida wareega Sema Finalka, kaddib markii 1-1 ay wada galeen kooxda Leicester City, waxaana Atletico ay is araga hore gurigeeda ku soo badisay 1-0, waxaana taas ka saaciday inay u soo baxdo Sema Finalka.
Caawa ayaa waxaa la ciyaarayaa kulamo xiiso leh, waxaa ka mid ah ciyaarta dhex mari doonta Kooxaha Barcelona iyo Juventus iyo kulanka kale ee Monaco vs Borussia Dortmund
Wasiirka Arrimaha Gudaha Hirshabelle oo amar ku bixiyay in laga guuro Isbitaalka Jowhar